TSCM, onye na-ere Apple, ga-ewulite ndị enyemaka 6 na Arizona (USA) | Esi m mac
TSCM, onye na-ebunye Apple, ga-ewulite ndị enyemaka 6 na Arizona (USA)
Designlọ ọrụ nkwekọrịta ọtụtụ ndị Taiwanese na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na Taiwan na otu n'ime ụwa kachasị baa uru, ga-ewulite ụlọ ọrụ ọhụrụ na Arizona. TSCM ekwuputala n’afọ gara aga na ọ chọrọ iguzobe onwe ya na Grand Canyon State. Mana akụkọ ọhụụ na-egosi na ọ bụghị naanị na ọ ga-abụ ngalaba enyemaka ka a ga - ekepụta kamakwa na a na - ekwu maka ya ruru isii.
Dị ka akụkọ si kwuo, el Apple si M na A usoro TSMC mgbawa onye rụrụ na-ezube iwu ihe karịrị nanị ụlọ ọrụ mgbawa mara ọkwa na United States. Kpọmkwem n'obodo Colorado Canyon, Arizona. Na Mee 2020 ekwuru na ụlọ ọrụ ahụ ga-ewu ụlọ ọrụ ijeri $ 12.000 na steeti. A na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ahụ malite imepụta olu na 2024.
Isi okwu atọ maara nke a, bụ ndị kwuru na achọghị ka amata aha ha n'ihi na enyereghị ha ikike ịgwa ndị mgbasa ozi, ha gwara Reuters na a na-ezube ihe nrụpụta ụlọ ise ọzọ. O doro anya ihe mgbakwunye mmepụta na itinye ego ga-abụ ha nwere ike ịnọchite anya ụlọ ọrụ ndị a na ụdị teknụzụ na-eme mgbawa. TSMC kwuru n'ọnwa gara aga na o mere atụmatụ itinye ego $ 100.000 ijeri n'ime afọ atọ na-esote iji nwekwuo ikike mmepụta, ọ bụ ezie na ọ nyeghị nkọwa.
N'ịtụle mgbawa mgbawa nke ụlọ ọrụ teknụzụ nwere ugbu a, akụkọ a na-abịa. N'ụzọ ezi uche dị na ya abụghị maka oge a kapịrị ọnụ, mana ee maka n'ọdịnihu yiri ihe ihe na-eme ugbua. Apple ga-erite uru kachasị na ịnweta ụlọ nrụpụta mgbawa nke dị nso ma nwee ike belata ọnụahịa.
Buru n'uche na gọọmentị Biden na-akwadebe iji ọtụtụ iri ijeri dollar iji kwado ọrụ nke ibe ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » TSCM, onye na-ebunye Apple, ga-ewulite ndị enyemaka 6 na Arizona (USA)
Enwere ike ịtọgharịa AirTag? Ọ bụrụkwanụ na m chọta otu ma ọ bụ chọọ ire ya?
Esi gbanwee aha AirTags gị